Natiijadii Group D - BBC Somali
Natiijadii Group D
30 Jannaayo 2015
Qeybtii hore ee cayaarta ayey labada kooxba ku dheeleen si kalsooni iyo firfircooni ah.
Cameroon ayaa dhowr jeer isku dayday inay iska soo gudo goolkaasi balse waa ay u suuragali waysay, oo ciyaaryahankooda Edgar Salli ayaa ka khasaariyay laba fursadood oo gool loo fishay.
Kooxdan lagu naaneeso maroodiyada ayaa waxa ay Axadda la dheeli doonaan kooxda Aljeeriya, iyadoo tababare Herve uu digniin u diray taageerayaasha iyo ciyaartoyda kooxdaasi, oo mar la waydiiyay inuu ka faa’iidaysan doono khibradda uu u leeyahay ciyaaraha Aljeeriya ayaa waxa uu yiri “haa dabcan”.
Dhanka kale ciyaartii dhexmartay kooxaha Guinea iyo Mali ayaa ku soo gabagabowday barbaro 1-1 ah, barbarahaasina waxa uu horseeday in midkoodna aanu u gudbin wareegga rubac dhammaadka maadaama ay 3-dii ciyaar ee ay dheeleen ay ka aruursadeen goolal iyo dhibco isku mid ah, marka maadaama aanay kala harin waa in loo sameeyaa qori tuur si midkood uu ugu gudbi tartanka qeybihiisa kale midka kalana uu boorsooyinkiisa u laablaabto.
Lahaanshaha sawirka getty image
Haddaba waxay noqotay maalin kadib in qori tuur, oo nasiib ah lagu kala saaro. Waxaana nasiibka ku soo baxay kooxda Guinea, oo Mali waa laga nasiib wacnaaday. Guinea ayaana la cayaari doonto kooxda Ghana.
Markii ugu dambeysay oo qori tuur lagu kala saaro laba kooxood tartankan ayaa waxa ay aheyd 1988-dii markaasi oo ay Aljeeriya ka faa’iidaysatay inay ku soo baxdo nasiibkeeda halkaana ay daadka ku raacisay kooxdii Ivory Coast.